Salaamanews » Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho kula kulmay wafdi ka socday Mareykanka
Home » Warar Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho kula kulmay wafdi ka socday Mareykanka Print - Daabace: SalaamaNews - Feb 19th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Degmooyin ka tirsan Shabeellaha hoose oo laga fara saaray kooxda al-ShabaabIn Somalia, a window of opportunityMusiibada fatahaada wabiga shabeelle ee Baladweyne iyo Ogeysiis ummuurtaasi ku saabsan oo Soomaalida Minnesota ku socdaDastuurka Maser meel marintiisa muran baa ka dambeeya (warbixin)Baarlamaanka oo isku raacay in dastuurka dalka lagu dhaqmo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu maanta la kulmay Keith Ellison oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga dimoqraaddiga, ahna xildhibaankii ugu horreeyay ee Muslim ah ee ku biira Kongareeska Maraykanka.
Madaxweynaha iyo Mr. Keith Ellison ayaa yeeshay kulan qaatay muddo 45 daqiiqo ah oo ay uga wada hadleen xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Maraykanka iyo horumarka ay sameyneyso Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan iyo Keith Ellison
Xasan Sheekh ayaa uga mahadceliyay dowladda Maraykanka taageerada ay siiso dowladdiisa iyo sida ay dalkeeda ugu soo dhoweysay boqollaal kun oo qaxooti Soomaali ah.
“Gobolka Minnesota waxaa ku nool Soomaalida ugu badan marka laga reebo qaaradda Afrika. Sidaas darteed waxaa farxad noo ah in xildhibaan Keith Ellison uu ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii hore booqasho ku tagay dalka Maraykanka, waxaana mas’uuliyiintii halkaas ku soo dhoweeyay ka mid ahaa xildhibaan Keith Ellison oo madaxweynaha ku casuumay gobolka Minnesota.
Tags: warar « Qoraalkii HoreAMISOM oo deeq gaadhsiisay cisbitaalka Beledweyne	Qoraalka Xiga »Netherlands: Soomaalida oo dib loo celinayo	Halkan Hoose ku Jawaab